I-Ombre: iinwele ezinombala ezimnyama kunye neenwele ezimhlophe: ubugcisa, isithombe phambi nangemva, ekhaya
I-Ombre: Umbala wezinwele
Namhlanje, imibala yeenwele usebenzisa indlela ye-ombre ithandwa kakhulu. Inokuthi yenziwe kokubili kwi-salon nasekhaya. Kukho into enjalo njengokuhlaziywa. Enyanisweni, zombini ubuchwepheshe buhluka kancinci. Kuzo zombini iimeko, iimpembelelo zeengcambu zotshiswa elangeni okanye izimpande ezingaphezulu zidalwa.
Ukwahlula phakathi kwe-shadow kunye nokuhlaziywa
Ukuhlaziywa kwemibala kukuguqulwa kombala, ukucwangciswa kwee-shades ngaphakathi kwemida yombala omnye. Le teknoloji ayiyazi nje kuphela kubagcini bezinwele, kodwa nakwabakhi, abayili befestile kunye nabenzi bamacwecwe. I-Ombre yimeko ekhethekileyo yokuhleka, umbala ogqithiseleyo wombala ukusuka komthunzi omnye ukuya kwenye. Kwaye kukho ithuba lokukhetha iintlobo ezahlukeneyo zombala. Le ndlela yokubala imibala ifanelekile kwabo bafuna ukuhlaziya isitala sabo kwaye bangabangela utshintsho lwehlabathi. Kukho iintlobo ezininzi zeendlela:
iklasikhi - imibala emibini eyahlukileyo;
i-multitonal - ukuguqulwa okugqithiseleyo kwemibala emininzi;
umbala (i-shadow shades for girls creative and brave);
I-bronze (ihambelana nomphumo weengcambu ezingaphezulu).
Kwinqaku! Uhlobo lokugqibela lomzobo lufumanisa iibunununu ezifuna ukuzilungisa ngokwasemthunzini omnyama. Ingxaki yeengcambu ezigqityiweyo ixazululwa. Esikhundleni seMoviton, ngoku kuyindlela ehamba phambili.
Ifoto yeenwele ezenziwe ngethambo lomthunzi ngeenwele ezimhlophe
Ekuqaleni, le nqubo yayiqhutywe kwiibrunettes kunye nabasetyhini abanobomvu. Nangona kunjalo, ngexesha liye lamkelwa yi-blondes. Kwizintambo ezikhanyayo, zibukeka kakuhle kumbala ombini kunye nobuninzi bebala.
Ngokuba i-blondes ifanelekile ukudibanisa imibala eyahlukeneyo: ushokoledi, ubhedu, i-chestnut nabanye. Izisombululo ezintle ziya kufikelela.
Labo abanamaqabunga amancinci, le ndlela ibaluleke ngokukhethekileyo, kuba ibonakala iveza umthamo. Amantombazana amaninzi, aneemikhono ezikhanyayo ezikhanyayo kunye ezikhanyayo, umbala izimpande kumbala omnyama, kwaye iziphelo zishiywe yendalo. Lo mbala ufanelekile iipilisi zaliphi na ubude, zombini ubude kwaye bufutshane. Unokwenza okuchaseneyo. Oko kukuthi, iingcambu zihlala zicacisiwe, kwaye iziphelo zibumnyama. Kubalulekile kubantombazana abanentlunganiso ngumbala wesikhumba. Ukuba ibumhlophe, kulungele ukugaya i-shades shades, ngelixa ubuhle obuhle buhlaza kunye nembala ye-chestnut iya kuhambelana. Ngo-2016, ukuthandwa kwepeyinti engalinganiyo ekupheleni kwayo, ukudala i-flame effect.
Ifoto yeenwele ezidaywe ngeenwele ezimnyama
Abafazi abaneenwele ezimnyama kunye nama-brunettes baya kuhanjelwa ngokutshintsha kwemibala esuka emnyama ukuya ekukhanyeni. Iibhentshi ezikhanyayo zee-shades ezahlukeneyo ziya kunika umphumo ongaqhelekanga. Namhlanje, imibala ye-burgundy ne-lilac ithandwa.
Ukudweba ngale ndlela ngenxa yamabhinqa kunye nabasetyhini abanamakhanda abomvu kubhekwe njengona nto ingabonakaliyo. Ukuba wenza izimpande ezimnyama, abafaneki ukuba batyunde njengoko bekhula. Isibhokhwe esisiBrown sinokukhanyisa kuphela iiphelo, sishiye ezinye iindawo eziqhelekileyo.
Emva kombala ochanekileyo, umntu unokukrazula ezinye zeziphene ebusweni. Ukuba umfazi unesimo esijikelezayo, ulungele ukukhanyisa okanye ukukhanya okubonakalayo. Xa usebenzisa i-shades emininzi, umthamo weentloko zeentloko ukhula.
Ngomdwebo ongqambileyo (i-splashshits) ungawufezekisa umphumo wokukhanya okukhanyayo kokukhanya. Ukuqwalasela kuya kutsalela imida emide, ipeyinti ngemibala eyahlukileyo. Ngexesha elide, isisombululo esinjalo siya kulungeleka.
Ifoto emva kokuthotywa kwemibala emibini yeenwele
Ngethuba lokuqala ubuchule bokuhlaziywa kwaqala ukusetyenziswa ngo-2010 kwaye buhlala buqhelwe kude kube namhlanje. Abamangalisa abaninzi bakhetha le ndlela. Iifoto zengqungquthela, ezifakwe ngemibala emibili, zichazwe ngezantsi.
Into ethandwa kakhulu kukudibanisa kwe-blonde kunye ne-chestnut. Iingcebiso zimibalabala, kwaye inxalenye engezantsi yentloko yevayo imnyama. Ngaloo ndlela, kunokwenzeka ukudala umphumo wezimpande ezingaphezulu. Ukubala imibala eqaqambileyo akuthandi kakhulu. Into ephambili ukuyiqwalasela yindlela efanelekileyo yokukhetha imibala. Kufuneka bathululelwe phakathi kwabo kwaye ngokubanzi bahlangane ngempumelelo. Ukuba sithetha ngomphumo oqaqambileyo, kulungile ukudibanisa upende obumnyama nophephu.
Ukugcinwa kwemigca emibini okanye emibini imibala yindlela yokwenza imfashini namhlanje. Kwaye, le ndlela ingasetyenziselwa kuzo zombini ezifutshane kunye ezide. Le ndlela ayilula, ngakumbi xa usebenzisa imibala emininzi. Ngoko ke, ukuba akukho na amava athile, kuyacetyiswa ukuba u tyelele i-salon, kunokuba uzame ekhaya. Ewe, ixabiso lokutshintsha umfanekiso kule meko liza kuba liphezulu, kodwa umphumo lufanelekile. Imibala yeenwele kwisitayela se-ombre namhlanje ukhethwa inani elikhulayo labasetyhini.
Izinwele ezinde ukuba zikhule njani
Iindlela zakutshanje zokubuyisela iinwele
Ndingayibalalisa njani inwele yam
Ungayifaka njani inwele zakho ekhaya
Iimpawu ezimnandi kakhulu zeNew Year Year 2016 ngeenwele ezinde, ifoto
Yintoni yokutya xa ubeletha
Kulula kangakanani ukususa iindlebe kwiinqumlo: IMISEBENZI emi-5
Ngokokuqala ngqa kwiklasi yokuqala
Indlela yokudibanisa umntwana kwi-kindergarten: Uluhlu olupheleleyo lwezinto ozithatha kunye nawe okokuqala
Iziganeko zengqondo yomntwana obandakanyekayo kwicandelo lezemidlalo
Zithande, kwaye onke amaphupha aya kuzaliseka
Unjani uhlobo lweenwele ozenzayo kuNyaka omtsha 2017 we-Firecracker? Izinketho ezandleni zabo kwizinwele ezinde, eziphakathi kunye ezifutshane (iifoto ngeyiteyathelo kunye namavidiyo)
Iiresepe ezilungileyo zetafile yonyaka omtsha
Kwaye kwaziwa ukuba zininzi iinkwenkwezi zifumana izibonakaliso ezingenangqungquthela kwimbonakalo yenkulumo
Yimiphi imibuzo engayimbuza yona?
Ukuphulukisa inkqubo yokuziphilisa i-reiki
I-horoscope yaseTshayina yezibonakaliso zezodiac
Umhlobo ulala nomntu wam
Iitapile ezinomso ngobisi kunye namantongomane
Kunokuba uthathe umntwana endleleni